Budata Truck Simulator 2018: Europe APK maka Android
Budata Truck Simulator 2018: Europe
Free Budata maka Android (544.70 MB)
Budata Truck Simulator 2018: Europe,
Truck Simulator 2018: Europe, mmepụta ụlọ, kpamkpam nasụsụ English, ọ bụghị naanị gam akporo; Egwuregwu simulator kacha mma nelu ikpo okwu mkpanaka. Ụgbọ ala eletrik nke ọgbọ ọhụrụ kacha mma netiti egwuregwu gwongworo mkpanaka nwere ezigbo okporo ụzọ, ihu igwe dị adị, okporo ụzọ dị iche iche, maapụ zuru ezu na ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ. Ọ bụ nefu ibudata na igwu egwu, kwa!
Anyị na -eji gwongworo kachasị amasị anyị na Truck Simulator 2018 na -agagharị nobodo ndị Europe, egwuregwu ụgbọ ala ọhụrụ nke egwuregwu Zuuks, onye nrụpụta egwuregwu ịme anwansị nke ruru nde nde nbudata na ekwentị. Nime imepụta ihe, nke na -agwakọta eserese eserese nke ọma na ahụmịhe ịnya ụgbọ ala, anyị na -ewere ọkacha mmasị anyị netiti gwongworo 9, gụnyere gwongworo eletrik ọhụrụ, wee gaa nokporo ụzọ dị ogologo. Ọ naghị awagharị nokporo ụzọ obodo, obodo, okporo ụzọ; Anyị na -arụ ọrụ na ọrụ e kenyere anyị. Ngwa ngwa anyị rụzuru ọrụ, ka anyị na -enwetakwu ego, mana ọ bụrụ na anyị mebie iwu okporo ụzọ, akara anyị na -ebelata. Site nụzọ, ihe niile bụ eziokwu. Anyị na -amalite ụgbọ ala anyị site na ịpị bọtịnụ mmalite / nkwụsị, anyị na -etinye eriri oche anyị wee pụọ nenweghị nsogbu. Ihu igwe na -agbanwe mgbe niile mgbe ị na -anya ụgbọala.
Truck Simulator 2018: atụmatụ Europe:
Ugbo ala 9 ahọpụtara (gụnyere gwongworo eletrik ọhụrụ)
Ime ụlọ zuru oke (kokpiiti)
Ahụmahụ ịnya ụgbọ ala
Mgbanwe ihu igwe (mmiri ozuzo, snow, alulu)
Ezigbo okporo ụzọ
Obodo, obodo na okporo ụzọ
Karịrị ọrụ 60 na ọrụ
Ebe na-adọrọ anya
Interface Turkey zuru oke
Ngwa ndị emetụtara: Budata Europe Truck Simulator
Truck Simulator 2018: Europe Ụdịdị
Nha faịlụ: 544.70 MB
Mmepụta: Zuuks Games